Ma ciyaari karo AVI Files on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360? Xaliyay
Ma ciyaari karo files AVI ku saabsan Madaxweyne Siilaanyo Oo 360? Dad badan ayaa ka cabanaya in marka ay isku dayaan in ay Radidiyaha files AVI ee ay Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, ay la keeneen in farrinta ah qalad soo socda "ma ciyaari karaa content sababtoo ah waxaa laga yaabaa in aan la taageerin".
File AVI waa file multimedia ama weelka loo isticmaalaa in lagu kaydiyo video iyo durdurrada audio. Back 2007, update multimedia Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 ee ku daray taageerada labada DivX iyo Xvid videos. Sidaas darteed, files AVI encoded midkood DivX ama Xvid ayaa waxaa sidoo kale lagu taageeray laguna la jaan qaada Console ah. Si kastaba ha ahaatee, files AVI aad weli waa la diidi doonaa haddii codecs ma gudahood liiska waxa codecs ku taageeray. Si loo xaliyo dhibaatadan, waxaa jira hab fudud oo wax ku ool ah. Taasi waa in ay isticmaalaan Wondershare Video Converter . Waxay kaa caawinaysaa in aad si toos ah aad AVI video in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360. diri Fadlan hoos u gudbin, waayo, guide tallaabo-tallaabo.
Media plugin Server gelineya inaad si toos ah u sii qulquli kasta video in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, xitaa iyada oo aan diinta.
Siinayaa oo ololaysa xawaaraha diinta soonka, wax ka badan tartanka suuqa ee 30X ugu dhaqsiyaha badan.
Waxaad u isticmaali kartaa si kor video by falinjeeerka, lana siii, qoqobada, isagoo intaa ku daray saamaynta, iwm
Xataa waxaad u isticmaali kartaa si ay u gubaan aad video inay DVD inay ku raaxaystaan ​​on your TV.
1 Load files AVI
Waxaad sidoo kale riixi kartaa Add Files button on geeska gacanta sare-bidix ee interface ama si toos ah jiidi-iyo-hoos u files AVI aad ka kombiyuutarka gal barnaamijkan. The files uploaded la hir duceysanayaan doonaa on interface ka.
2 Dooro Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 sida qalab geeyo ah
Hubi in aad PC iyo Madaxweyne Siilaanyo 360 waa in shabakad isku mid ah. Tag ah "Streaming" guddi ka dibna hoos-hoos menu, Madaxweyne Siilaanyo la doortay 360. Markaas kaliya file AVI in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 geeyo bilaabi adigoo riixaya "Stream" on geeska gacanta midig ugu hooseysa Converter this.
3 Stream warbaahinta files si Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 for loo maqli karo
Dhowr ilbiriqsi ka dib, waxaa laguu keenay in doonaa iyadoo suuqa kala pop-up ah. Halkan mouse ka badan video ah oo aad rabto in aad sii qulquli ka dibna ku dhufatey "Play On TV" button. Markaas Waxaad riix kartaa badhamada kala qaybta hoose dhinaca si fudud loo xakameeyo loo maqli ka.
Sida loo Play MKV Files on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360
Sidee si loo yareeyo Video File Size
> Resource > Video > ma ciyaari karo AVI Files on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360? Xalka